Naqshadaynta Sharaxaadeed Maxay Tilmaamaha Sawir Gawaarida Wanaagsan leh
Waxaa jirey waqtiyo marka sawiradu ay u dhigantaa kun eray, boqolaal jecleysi, tweets, suulka iyo saamiyada. Intaa ka baddan, sawirrada ayaa la xoqay, la wadaago, dib loo isticmaalay, loona hagaajiyay barwaaqada ganacsiga. Dadku waxay guud ahaan xoqayaan sawirada iyaga oo aan ogolaansho iyo ujeedadoodu tahay inay ballaariyaan shabakadahooda adduunka oo idil. Muuqaalka sawirku waa mid ka mid ah mowduucyada ugu dayacan maalmahan, laakiin xirfadahan hoos yimaada suunka qalabkaagu wuxuu ku siinayaa faa'iidooyin kala duwan. Waxaa muhiim ah in la doorto nooca saxda ah ee sawirada sawirada oo kaa caawin karta inuu koro ganacsigaaga iyo hagaajinta waxqabadka guud ee website-ka. Halkan waxaan ka wada hadalnay qaar ka mid ah muuqaalada sawir sawir leh oo weyn waa in ay lahaadaan:
Abuuritaanka Agent-and-Click Agent Creation:
Sawir sawir. Sidoo kale, waxay si sahlan u abuuri kartaa wakiilada soo saaridda oo waxay ka dhigeysaa waayo-aragnimadaada daba-galka in ka badan cajiib ah. Intaa waxaa dheer, sawirada sawirta uma baahna inaad leedahay barnaamijyo ama xirfado codsi.
Muuqaalka Muuqaalka Tagista:
Sawir sawir leh, waxaad soo saari kartaa mawduucyo qeexan oo bartilmaameed badan oo bogag badan leh. Sidoo kale, waxay kaa caawineysaa yareynta shuruudaha waxqabadka hoose iyo in aad hesho sawirro tayo sare leh gudahood daqiiqado.
Sawir gacmeedka la yareeyey:
Diiwaanada dabeecadaha isticmaalaha:
Badeecada caadiga ah iyo soo saaraha macluumaadka ma diiwaan galiyaan habdhaqanka dadka isticmaala. Laakiin sawirka sawirku wuxuu qori karaa dabeecad user ah ilaa xad iyo wuxuu kaa caawinayaa inaad ku socoto bogaga internetka.
Teknoloojiyada Waxbarashada Mashiinka:
Waxaa jira tiro yar oo ah shabaqa websaydhka . Sawir sawir leh ayaa leh tiknoolajiyadaan oo si sahlan u aqoonsanaya sawiradaada iyo sidoo kale qoraalka. Waxay yareyneysaa kharashyada dayactirka in ka badan 70% oo aad hesho xogta aad rabto ee ka imanaysa farshaxanka la beegsaday.
Sawir gawaarida ah
Sawir sawir leh ayaa kuu fududeynaya inaad hesho bogga internetka oo lagu beegsado goobo tiro badan. Plus, uma baahnid wax aqoonsi ah oo gaar ah si aad u heshid waxyaabo ka ilaalsan bogga. Taa baddalkeeda, waad heli kartaa oo soo saari kartaa bogga oo dhan oo ay ku jiraan qoraalka iyo sawirada leh sawir sawir leh, iyada oo aan loo baahnayn macluumaadka login.
Nidaamka Nabadgelyada ee Caqli-gal ah:
Qalabkani wuxuu xoqin karaa sawirro iyo fiidiyoow adiga oo sidoo kale wuxuu badbaadiyaa waqtigiina oo wuxuu fuliyaa hawshiisa si habboon. Marka la soo gaabiyo, waxaad xaqiijin kartaa in aad heleyso muuqaalo tayo sare leh oo aad ka heli karto xog sax ah bogagga intarneetka ah ee aad rabto.
Sawir sawir leh, waxaad xoqin kartaa bogga internetka, xogta macluumaadka, iyo qoraallada meelo badan oo ka mid ah goobaha. Waxay si toos ah u soo saari doontaa sheekooyin ay weheliyaan sawiradooda iyo inay dib u qoraan koobabkooda.
Haddii aad nasiib badan tahay, waxaad awoodi doontaa inaad ka hesho sawirro bilaash ah oo aan laga helin Google, Bing, Yahoo ama macluumaadka kale ee internetka. Qeybta ugu muhiimsan waa in aad xoqin karto sawirada aad rabto iyada oo aanad ku dabcin tayada. Way adag tahay in la helo datasets oo ku habboon baahiyahayaga oo dhan. Nasiib wanaag, sawirka sawirka wuxuu ka dhigayaa shaqadaada mid fudud, waana doorashadii hore ee shirkadaha iyo noocyada sare. Haddii aad ixtiraamto sharciyada xuquuqda lahaanshaha, waxaad ka heli doontaa sawirada ugu wanaagsan qalabka wax lagu burburiyo isla markaana abuuro talooyin dheeraad ah shabaqa Source .